Ahoana ny fomba ahazoana fangatahana fahazoan-dàlana hemp any Illinois 2020 | Hemp Farming
Fikirakirana ny fampiharana ny lisansa Hemp Illinois
Te-hanampy amin'ny toeram-pambolena am-bavanao?
Ahoana ny fomba ahazoana fahazoana mamboly na fahazoan-dàlana hiasa any Illinois?
Tamin'ny 30 aprily 2019 - Navoakan'i Illinois ny taratasy fangatahana hemp. Azonao atao ny mahita ny lisansa lisitra indostrialy hemp ao amin'ny rohy eto ambany. Faly izahay manampy anao hahita azy io haingana kokoa.
Tsindrio Raha Hanomboka ny Fampiharana Hemp Illinois anao.
Mora ny mivezivezy ny fangatahana fahazoan-dàlana ho an'ny indostrialy any Illinois, fa ny fizotrany manontolo hatramin'ny fampiharana ka hatramin'ny voa dia ny fivarotana ny fomba anampianay ireo orinasa te-hanitatra ny asan'ny hemp ho any Illinois, aza misalasala manome antso anay hiady hevitra momba ny tanjon'ny orinasanao ao amin'ny CBD na hemp indostrialy.
Misokatra ho an'ny taona 2020 ny lisansa Hemp Industrial Industrial
Ny lalàn'i hemp Illinois dia tsy vitan'ny fotsiny, fa koa efa navoaka ny fitsipika, izay midika fa efa vonona amin'ny vanim-potoana voalohany mitombo izy.
Ny fe-potoana fanehoan-kevitry ny besinimaro momba ny lalàna vaovao momba ny Hemp dia tapitra tamin'ny 11 febroary 2019, araka ny fanontana farany nataon'ny Departemantan'ny Fambolena Common Ground boky. Voavaha ny lalàna ary antenaina anio ny fangatahana hemp indostrialy ho an'ny fahazoan-dàlana hamboly na fisoratana anarana hanodinana ny hemp.
Illinois ' Ny lalàna momba ny indostrian'ny Hemp mandeha amin'ny taona fambolena taona 2019. Na dia afaka manangona tombony ho an'ny sasany ireo mpandray azy tany am-boalohany, nandritra ny taona maro dia mety ho lasa fahita mahazatra eo am-bavan'ny voanjo sy soja any an-tanimbary io ny hemp.
tamin'ny 2021, nanjary nahomby ny fitsipiky ny hemp farany an'ny USDA. Midika izany fa hifanaraka amin'ny lalàna federaly napetraky ny USDA. Mbola manana herintaona hafa isika alohan'ny fitakiana DEA, saingy ny lalàna napetraky ny governemanta federaly dia mila harahina ka midika izany fa hohavaozina kokoa ny fizotran'ny fahazoan-dàlana hemp kokoa sy tsy voafehy.
Famaritana ny indostrian'ny Hemp
Fizarana 5 amin'ny làlan'ny indostrian'ny Hemp no mamaritra ny indostrian'ny Hemp:
Ny "hemp indostrialy" dia midika fa ilay zava-maniry Cannabis sativa L. sy izay faritra amin'io zavamaniry io, na mitombo na tsia, miaraka amina delta-9 tetrahydrocannabinol fatratra tsy mihoatra ny 0.3 isan-jato amin'ny lanjany maina novolena tamin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana navoakan'ny ity lalàna ity na misy ara-dalàna eto amin'ity Fanjakana ity, ary misy ny vokatra mpanelanelana na vita vita na azo avy amin'ny hemp indostrialy.
Andao esory izay dikan'izany.
rongony sativa dia hemp, fa koa…
fa ny cannabis sativa dia tsy mihoatra ny 0.3 isan-jaton'ny lanjan'ny THC, ary
namboarina teo ambany fahazoan-dàlana, na raha tsy izany dia teo amin'ny fanjakan'i Illinois, ary
izay vokatra hafa vokarina na nalaina avy amin'ny hemp
Manana ireo isa efatra ireo ve?
Ny fitsipika dia misy ireto fitsipika manaraka ireto:
Tsy misy olona mitombo hemp raha tsy misy fahazoan-dàlana
Tsy misy olona misambotra hemp raha tsy misy fahazoan-dàlana
Ny voa rehetra, ny clones ary ny transplants dia tsy maintsy voamarina ao ambanin'ny AOSCA.
habaka ambany indrindra eran-tany hekitara ho an'ny ety ivelany sy 500 sq.ft. ho an'ny fitombo ao anaty
Ny fangatahana fahazoan-dàlana amin'ny hemp any Illinois dia tsy maintsy apetraka amin'ny fanjakana ALOHA mitombo
Vao tsy ela akory izay, ny fanjakan'ny Illinois dia namoaka ny fangatahana fangatahana ho an'ny hemp ihany koa:
Ny anarana sy ny adiresin'ny mpangataka
Ny karazana orinasa na fikambanana, toy ny orinasa, LLC,
fiaraha-miombon'antoka, tompon'ny tompony, sns.;
Anaran'ny raharaham-barotra sy ny adiresy, raha hafa noho ireo alefa ao
valin-teny amin'ny fizarana (a) (1);
Ny famaritana ara-dalàna ny faritry ny tany, ao anatin'izany ny Global Positioning
Ireo mpandrindra rafitra, ampiasaina hamolavola hemp indostrialy;
Sarintany momba ny tanin'ny tany izay mikasa ny hampitombo ny indostria ny mpangataka
hemp, mampiseho ny fetra sy ny refy amin'ny fitomboan'ny
hektara na metatra toradroa;
Tahirin-kevitra hanaporofoana ny faritry ny tanimbary dia toeram-pambolena araka ny voafaritra ao amin'ny fizarana 1-60
ao amin'ny kaody momba ny hetra fananana; ary
Ny vola mitentina $ 1,100.
Ahoana ny fomba hahazoana fahazoan-dàlana mitombo hemp any Illinois?
Raha mila fanampiana amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana Hemp Industrial Hemp ny orinasanao dia miantso anay mpisolovava tafahoatra.
Na fenoy ny chatbot noforonin'izy ireo tamin'ity tranonkala ity. Hifandray isika!
Hemp Cultivation na fanodinana
Ny lalàna 'Hemp Industrial' Hemp dia mitaky fahazoan-dàlana na fambolena (fampitomboana) ny hemp, na fanodinana (famokarana) ny hemp.
Fambolena Hemp Under Illinois Law.
Fizarana 10 amin'ny lalànan'ny Hemp Industrial Industrial Hemp dia manome ny fepetra takiana amin'ny fangatahana fahazoan-dàlana. Amin'ny ankapobeny, zavatra telo ihany no takiana araka ny Andininy 10 (b) amin'ny lalàna. manome zana-tsokajy telo:
(1) ny anarana sy ny adiresin'ilay mpampiasa;
(2) ny filazalazana ara-dalàna momba ny faritry ny tany, ao anatin'izany ny fandrindrana ny rafitra Global Positioning System, ampiasaina hamolavolana hemp indostrialy; ary
(3) raha ny lalàna federaly dia mitaky tanjona fikarohana momba ny fambolena hemp indostrialy, famaritana ny iray amin'ireo tanjona fikarohana natao ho an'ny fambolena hemp indostrialy izay mety ahitana ny fandinihana ny fitomboana, ny fambolena, na ny fivarotana hemp indostrialy; na izany aza, ny fepetra takian'ny fikarohana dia tsy hoheverina hamerana ny fivarotana varotra indostrialy.
Ankoatr'izay, ny lalànan'ny Hemp Illinois dia mitaky fepetra fanampiny avy amin'ireo mpamboly Hemp. Tokony:
manao fisafoana iray isan-taona momba ny fambolena fambolena
fanadinana raha tsy mihoatra ny habetsaky ny THC takiana
Ny fitsipika napetraky ny departemantan'ny Fambolena ao Illinois ho an'ny saram-bola, sonia ary endrika.
Fandehanana amin'ny indostrian'ny Hemp
Tsy toy ny mpamboly hemp, ny mpikirakira ny hemp dia tsy mila fahazoan-dàlana - fa fisoratana anarana ihany.
Ny fizarana 10 (b-5) dia manome:
Ny olona iray dia tsy tokony hanao fizarana hemp indostrian'ity fanjakana ity raha tsy misoratra anarana amin'ny sampana amin'ny taratasy voatondro ho an'ny sampana.
Mazava ho azy, rehefa avy nitombo ara-dalàna ny hemp ianao - na avy any Illinois izany na tsia - azonao atao ny manomboka manodina an'io hemp io ho lasa zavatra ilaina rehetra - saingy aorian'ny fahazoana ny fisoratanao anarana amin'ny fanjakana.
Famaranana ny fambolena Hemp na fanodinana
Ka na dia hita fa ny mpamboly ny hemp dia mila fahazoan-dàlana ihany, ireo olan'ny parasy miakatra ho vokatra toy ny CBD concentrate dia mila misoratra anarana.
Raha mila fanampiana amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana Hemp Industrial Hemp anao ny orinasanao dia miantso azafady amin'ny mpisolovava rongony (309) 740-4033.
Hatramin'ny fanavaozana farany indrindra an'ity pejy ity tamin'ny 22 Febroary 2019, ny departemantan'ny Agrulateure ao Illinois dia mbola tsy nanomboka naka fangatahana. Antsoy izahay izao mba hahazoana antoka fa rehefa tonga ny fotoana dia afaka mahazo fahazoan-dàlana ho an'ny hemp indostrialy ny orinasanao.
Fahazoan-dàlana mikraoba mifangaro ganja vaovao any New Mexico
by Tom | Jun 15, 2021 | Cannabis any New Mexico
Fahazoan-dàlana momba ny rongony mikraoba vaovao any New Mexico New Mexico dia nanangana ara-dalàna ny rongony fialam-boly fampiasan'ny olon-dehibe amin'ity taona ity. Ary tamin'ny alàlan'ny fananganana azy ho ara-dalàna dia nampidirina amin'ny fanjakana ny laharam-pahamehana rongony hampiasa olon-dehibe. Efa niresaka momba ny fomba hanokafana dispensary any New ...
by Tom | Jun 2, 2021 | Ahoana ny fomba ahazoana fahazoan-dàlana ho an'ny orinasa Marijuana any Virginia
Ahoana ny fomba hahazoana fahazoan-dàlana marijuana any Virginia Ny fahafantarana ny fahazoana fahazoan-dàlana marijuana dia dingana voalohany hitsinjovana ny indostrian'ny rongony any Virginia. Tamin'ny fiandohan'ny volana aprily 2021, nifidy i Virginia mba hanara-dalàna ny fampiasana marijuana ho an'ny olon-dehibe. Araka ny lalàna vaovao, ...